Indlu yamatye eneSauna AZZURRO - I-Airbnb
Indlu yamatye eneSauna AZZURRO
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJens C.
UJens C. yi-Superhost
Indlu yamatye ehlaziyiweyo entle enengaphakathi langoku entliziyweni eluhlaza ye-Istria, engekude kuLwandle lwe-Adriatic olucwengileyo. Amagumbi amabini amahle ayilwe ngokwahlukeneyo kunye nestudiyo esimnandi simema ukuba uphumle.
ICasa di Graziella ikwintliziyo ye-Istria kwaye ijikelezwe ziindawo zomnquma, izidiliya kunye nemithi. Ikufuphi nedolophu yamagcisa iGroznjan (Italian Grisignana), le dolophu yamaxesha aphakathi izele yinkcubeko unyaka wonke, kwaye isingathe uMnyhadala weJazz owaziwayo wamazwe ngamazwe ehlotyeni ngalinye. Izitudiyo ezingenakubalwa zivula iingcango zazo kwaye zonke izitrato unokuva izandi zezixhobo ezahlukeneyo ezidlalwayo.
ICasa di Graziella yeyona ndawo ilungileyo kubathandi bendalo. Kude kwingxolo yedolophu enkulu, ungavumela ingqondo yakho ibhadule kwaye uyonwabele nje imini. Apha awuyena umkhenkethi, kodwa undwendwe lwendalo. Ngethamsanqa elincinci, ixhama lindwendwela kwakusasa kwaye unokubukela iintaka ezidla inyama zoba isangqa phezu kwendawo emangalisayo.
Ngenani elipheleleyo le-175 sqm iCasa di Graziella ikumema ukuba uphumle kwaye ilungele ngokukhethekileyo izibini. Kukho amagumbi amabini ahlukeneyo (i-70 sqm nganye) kunye ne-studio ye-1 (i-35 sqm) yonke inomnyango wayo. Nganye ibonelela ngoxolo olugqibeleleyo kunye nembono emangalisayo yentliziyo eluhlaza ye-Istria, okanye yonke indlu inokubhukishwa ukuba ibe bucala kakhulu.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji kunye nefriji,
isitovu esine-4 yokutshisa i-ceramic hob kunye ne-oveni,
umenzi wekofu kunye nomenzi we-espresso,
itafile yesidlo sangokuhlwa,
I-oveni yomlilo kunye nezitulo ezimbini ezitofotofo,
ITV / iDVD indibaniselwano kunye namajelo esatellite,
i-wifi (Ukusetyenziswa okuqhelekileyo -umzekelo, ii-imeyile, imiyalezo - i-wifi iyafumaneka. Ngelishwa ukuhanjiswa kufuneka kuphetshwe ngenxa yokuba akukho mzila we-landline esisigxina kwaye ngoko umthamo wedatha ulinganiselwe),
ibhedi elingana nenkosi (200x200),
igumbi lokuhlambela elahlukileyo elineshawari yemvula evulekileyo,
into yokugxotha iingcongconi ezifestileni.
Kummandla ojikelezileyo kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye neefama zezolimo, apho unokonwabela ukutya okumnandi kwasekhaya okunje ngetruffles okanye iasparagus yasendle, ioyile entsha yomnquma, ukutya kwaselwandle kunye newayini entle.
Iilwandle ezimangalisayo kuLwandle lwe-Adriatic olucwebileyo lunokufunyanwa kufutshane nedolophu entle yaseNovigrad (i-Italian Citta Nova), nje imizuzu engama-20 ukusuka eCasa di Graziella.
Umbuki zindwendwe ngu- Jens C.
Ngelishwa asisoloko sikwazi ukuba kunye nondwendwe lwethu endlini. Nangona kunjalo, siyafikeleleka ngamaxesha onke kwiindwendwe zethu. Abamelwane bethu abathandekayo baphatha ukunikezelwa kwezitshixo kwaye banakekele ukucocwa kokugqibela kwamagumbi.
Ngelishwa asisoloko sikwazi ukuba kunye nondwendwe lwethu endlini. Nangona kunjalo, siyafikeleleka ngamaxesha onke kwiindwendwe zethu. Abamelwane bethu abathandekayo baphatha ukuni…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grožnjan